Igbo, John: Lesson 047 - Ntuchapụta nke ndị na-eso ụzọ (Jọn 6:59-71) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 047 (Sifting out of the disciples)
66 Ya mere, ọtụtụ n'ime ndị na-eso ụzọ ya laghachiri, ha esoghịkwa ya eje ije ọzọ. 67 Ya mere Jisus siri ndi-ozi iri na abua ahu, Ùnu onwe-unu nāchọ kwa ila?
Ọrụ ebube nke nri nke puku mmadụ ise mere ka ịnụ ọkụ n'obi uka. Otú ọ dị, Jizọs gosipụtara aghụghọ ahụ n'azụ ịnụ ọkụ n'obi a, bụ nke ga-eduga ọtụtụ ndị n'ebe ọ nọ. Ọ chọghị ịnụ ọkụ n'obi ma ọ bụ nsọpụrụ ma ọ bụ nkwenkwe na-enweghị isi maka ebumnobi doro anya. Ọ na-achọ ka a mụọ ya ọzọ, okwukwe siri ike nye ya n'amaghị azụ. N'otu oge ahụ, ndị nledo sitere na High Council dị na Jeruselem banyere ndị na-eso ụzọ ya; ha na-egwu ndị na-eguzosi ike n'ihe na a chụpụrụ ha n'ụlọ nzukọ ma ọ bụrụ na ha anọgide na-agbaso ihe ha kpọrọ onye nduhie ahụ. Ọtụtụ ndị nọ na Kapanaum agbakụtawo azụ ka ọtụtụ ndị nkịtị na-agbakasịkwa ya. Ọbụna ndị kwesịrị ntụkwasị obi na-atụ egwu ikike nke Council. Ha chere na okwukwe Jizọs dị oke oke, ọ bụ naanị ntakịrị nta nke ndị ji ezi obi soro ya nọrọ. Onyenwe anyi na eko tacha ọka wit site na igbogbo ah.
Tupu nke a, Kraist ahọrọla ndị ozi iri na abụọ n'etiti ụmụazụ ya na-egosipụta ebo iri na abụọ nke ndị ya. Nọmba a bụ nke 3 x 4 na-anọchi anya eluigwe na ụwa, ma ọ bụ karịa kpọmkwem, Atọ n'Ime Otu na akụkụ anọ nke ụwa. Mgbe anyị na-amụba atọ site na anọ anyị na-enweta mmadụ iri na abụọ. Ya mere, na ndi ozo nke ndi neso uzo elu igwe na uwa ka ejikoro ya, dika Triniti di nso na nkuku anọ nke uwa.
Mgbe nkewa ahụ gasịrị, Jizọs nwalere ndị ọ họọrọ ka ha kwado oku ha wee sị, "Ị chọkwara ịhapụ m?" Site n'ajụjụ a, ọ gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ikpebi ọdịnihu ha. N'ụzọ dị otú a ọ na-ajụ gị na ndị enyi gị n'oge nsogbu na oge mkpagbu, ị chọrọ ịhapụ ya ma ọ bụ ịrapara n'akụkụ ya? Kedu nke dị mkpa, ọdịnala, mmetụta uche, mgbagha ma ọ bụ nchekwa ihe onwunwe n'otu aka, ma ọ bụ mmekọrịta gị na Jizọs?
68 Saịmọn Pita zara ya, sị: "Onyenwe anyị, ònye ka anyị ga-aga? I nwere okwu nke ndụ ebighi ebi. 69 Anyị abịawo kwere ma mara na ị bụ Kraịst ahụ, Ọkpara nke Chineke dị ndụ."
Peter ama owụt ke idiọkn̄kpọ Christ eketịn̄ ke enye ekedi akwa itiat. N'ikwu okwu maka ndi ozo o zaghachiri, "Onye nwe ayi, onye ka ayi geje? Nani gi bu isi ndu ebighebi." O nwere ike ọ gaghị aghọtacha ihe niile Jizọs zubere, ma o nwere mmetụta dị omimi na nwoke ahụ bụ Jizọs nke Nazaret bụ Onyenwe anyị site n'eluigwe nke si n'aka ya jiri okwu ike na-eme ihe, ọ bụghị nke mmadụ nkịtị. Pita kweere na Onyenwe anyị nọ. O keere òkè na nkesa nke achicha ahụ. Aka Jizọs jidere ya mgbe ọ na-aga ịbanye. Obi Pita di na Jisos; ọ hụrụ Onyenwe ya n'anya karịa ihe ọ bụla ọzọ ma ghara ịhapụ ya. Pita họọrọ Jizọs n'ihi na Jizọs eburu ụzọ họrọ ya.
Onye ndu nke ndịozi ji okwu ndị a mechie akaebe ya: "Anyị kwenyere ma mara". Rịba ama, ọ sịghị, "Anyị maara wee kwere." N'ihi na ọ bụ okwukwe nke na-emeghe anya obi. Ọ bụ okwukwe anyị na-eme ka anyị nwee uche. Ya mere, Pita na ndi ozo ndi ozo nyebatara na ihe nke Mo Nso nke duru ha ka ha kwere na Jisos n'eme ka ha mara eziokwu. Ha na-etolite n'ịhụ ebube ya. Ezi ihe omuma nke Jisos bu onyinye amara nke Chineke.
Olee ụdị okwukwe nke ndị na-eso ụzọ Jizọs nwere? G in ibu ihe omuma nke okwukwe a? Ha na Mmasị Chineke dị n'ime ya bụ ndị mmụọ zuru oke n'ime ya. O jikotara na Onye nke ya ọrụ niile nke ndị nchụàjà, ọbụbụeze na amụma. Ndi eze, ndi isi nchu aja na ndi amuma di n'Agba Ochie ka etere ya site na Mo Nso. N'ime Kraist, a na-ejikọta ume na ngọzi niile nke eluigwe. Ọ bụ Eze Chineke kachasị ihe nile; n'otu oge ahụ ọ bụ Nnukwu Onye Nchụàjà ka ya na Onye Okike ha dị n'udo. O nwere ike ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ ma ọ ga-ekpe ụwa ikpe. Site n'okwukwe Pita nenwe ebube nke Kraist.
Ndị na-eso ụzọ ya kwenyere na Pita dị ka ọnụ na-ekwupụta na ha gbara akaebe ahụ dị mkpa: Jizọs a bụ Onye Nsọ nke Chineke, ọ bụghị mmadụ nkịtị ma ọ bụ ezi Chineke. Àgwà nile nke Chineke di n'aru ya dika Okpara Chineke. Ọ nọgidere n'enweghị mmehie ọ bụla, ma rụọ ọrụ ya dịka Nwa-atụrụ Chineke, dịka Onye Baptist buworo amụma. Ndị na-eso ụzọ hụrụ ya n'anya ma na-asọpụrụ ya, n'ihi na ha maara na ọnụnọ ya pụtara ọnụnọ Chineke. Na Ọkpara ha hụrụ Nna ahụ, ma ghọta na Chineke bụ ịhụnanya.
70 Jizos zara ha, si, Ọ bughi Mu onwem rọputara unu, bú ndi-ozi iri na abua, ma otù onye nime unu bu ekwensu? 71 Ma ọ bu okwu bayere Judas nwa Saimon Iskariot: n'ihi na ọ bu onye ahu gārara Ya nye; ndị iri na abụọ ahụ.
Jizos ji obi uto kwenye nka na egosiputa okwukwe na abawanye. Edi enye ama ọfiọk ke kiet ke otu mmọ ẹkedọhọ enye ke ediwak ini. Obi siri ike nke nwoke a mezuru ruo n'ókè nke na Jizọs kpọrọ ya 'Setan'. A họpụtara ndịozi niile, nke Nna ahụ dọtara n'ebe Ọkpara ahụ nọ, ma ha abụghị ndị na-arụ ọrụ n'aka Chineke. Ha nweere onwe ha irube isi n'olu nke Chineke ma obu legha ya anya. Judas kpachaara anya mechibido uche ya n'olu Chineke wee nyefee ya n'aka Setan bụ onye guzobere njikọ dị n'etiti ha abụọ. Judas ahapụghị Jizọs naanị dị ka ndị ọzọ hapụrụ Jizọs, ma ọ nọgidere na-eso Jizọs, onye ihu abụọ na-eme ka hà kwere. Ọ ghọrọ nwa nke 'Nna nke ụgha' ma nwee ọganihu na aghụghọ. Ebe Pita kwuputara ọrụ Jisos ji mezuo ya, Judas chebere atụmatụ ịrara Kraịst nye Onye Nnọchite Elu. N'ịbụ onye ịkpọasị kpaliri, o ji aghụghọ kpapụta aghụghọ ya.
Onye na-ezisa ozi ọma adịghị ekwubi isi okwu a dị mkpa na ọrụ ndị dị egwu na ikike e nyere ndịozi. Ma na-eme ka ndị mmadụ mara na ọbụna na gburugburu ndị kwesịrị ntụkwasị obi, e nwere onye nchụpụ. Jizọs achụpụghị ya ma ọ bụ gosi ya aha ya. Ma, o ji ndidi die ya ma ọ bụrụ na Judas chegharịa n'ihe ọjọọ ahụ n'obi ya.
Ezigbo Nwanna, jiri obi umeala nyochaa onwe gị. Ị bụ nwa Chineke ma ọ bụ nwa Setan? Ị na-emeghere onwe gị na mma nke Mmụọ Nsọ, ma ọ bụ na ị na-aga na kọmpat na Setan? Kpachara anya, ka ị ghara ileghara ihe mgbaru ọsọ nke ndụ gị anya. Onye-nwe-gi huru gi n'anya, O zọputawo gi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị jụ nzọpụta ya, ị ga-agagharị n'okporo ụzọ nke ihe ọjọọ ma nọgide n'okpuru ohu nke Setan. Laghachi na Kraịst n'ihi na ọ na-echere gị.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ị bụ Ọkpara Chineke, dị nsọ, dị ebere, dị ike na mmeri. Gbaghara m njehie m, mee ka m guzosie ike n'ọgbụgba ndụ gị, ka m wee dịrị ndụ n'adị nsọ, wee nọgide n'ihu gị, gbanwee ka ọ bụrụ onyinyo gị. Doonụ ụmụazụ nsọ, ka ha tolite n'okwukwe na ihe ọmụma, na ịgbara ihe niile ị bụ naanị ya bụ Kraịst, Ọkpara nke Chineke dị ndụ. Amen.
Gịnị ka ihe Pita kwuru pụtara?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:07 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)